युरिक एसिड भएका मानिसलाई यसकारण हुन्छ बाथ (भिडियोसहित) | Hamro Doctor News
रौतहटमा थपिए ७ जना कोरोना संक्रमित
सेती अस्पतालको आईसोलेसनमा राखिएका एक जनाको मृत्यु
शुल्क लिएर र्यापिड टेष्ट नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
युरिक एसिड भएका मानिसलाई यसकारण हुन्छ बाथ (भिडियोसहित)
धेरै नेपालीमा युरिक एसिडको समस्या छ । युरिक एसिडको बेलैमा उपचार नगरे यसबाट बाथ हुन्छ भन्ने जानकारी भने निकै कमैलाई मात्रै छ । युरिक एसिड त हो नी... भनेर लापरवाही गर्दा धेरै मानिस गम्भीर प्रकारको बाथ रोगी बनिरहेको बाथ रोग विशेषज्ञ डा. दीपा शाहको भनाइ छ । के हो युरिक एसीडबाट हुने बाथ ? यो हुने कारण, यसका लक्षण र बच्ने उपायबारे डा. शाहले दिएको सुझाब यस्तो छ ।
युरिक एसीडबाट हुने बाथ भनेको सामान्य किसिमको बाथ हो । बाथ देखिएका अधिकांश बिरामीमा युरिक एसिडकै कारणले बाथ भएको देखिन्छ । यो के युवा के वयस्क, के वृद्धा सबै उमेर समुहमा देखापर्छ ।
शरीरमा युरिक एसिड धेरै बढ्यो वा यसको चक्रअनुसार काम भएन भने यसका (क्रिस्टल) नुन जस्तो जोर्नीमा जम्छ र युरिक एसीडबाट हुने बाथ देखापर्छ ।
हाम्रो शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा आवश्यक्ता भन्दा बढी भयो भने यसले बाथ लगायतका रोग देखा पर्छ । युरिक एसिड हुने मुख्य कारण भनेकै प्युरिन बढी भएका खाना खानु वा खानामा सन्तुलन कायम नगर्नु हो । युरिक एसिड व्यक्तिको शारीरिक अवस्था र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा भर पर्छ । तर सामान्यतया आम मानिसमा ६ मिलिग्राम प्रतिलिटर भन्दा कम हुनुपर्छ । युरिक एसिडबाट हुने बाथ वंशाणुगत कारणले पनि हुन सक्छ ।
खुट्टाको बुढी औंलाको जोर्नी दुख्ने ।
जोर्नी आसपास रातो हुने ।
जोर्नीहरु दुख्ने ।
जोर्नी आसपास ससाना हड्डीका टुक्रा भेटिने ।
शरीर आलास्य हुने, दुख्ने ।
यस्ता खाना नखाने
रातो मासु, छाला, भुटन, आन्द्रा
भटमासबाट बनेका खाने कुरा
स्वस्थ खाना खाने ।
वर्षको कम्तीमा एक पटक स्वस्थ परीक्षण गराउने ।
युरिक एसीडबाट हुने बाथलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन् । यसको समयमै उपचार नगराए जोर्नीहरू चलाउन नसकिने, हिडडुल गर्न गाह्रो हुने लगायका समस्या आई मानिसलाई अपांग बनाउन पनि सक्छ । यसर्थ युरिक एसीडबाट हुने बाथबाट बच्न जरुरी छ ।
Last modified on 2019-05-07 15:00:06